साताको ब्लगर: रिता लामा - MeroReport
साताको ब्लगर: रिता लामा
काठमाडौंबाहिर बसेर ब्लगिङ गर्न वा सामाजिक मिडियामा नियमित रुपमा सक्रिय हुन विभिन्न कठिनाई हुन्छन् । लोडशेडिङको समस्या त देशभरी नै छ इन्टरनेटको पहुँच पनि राजधानीबाहिर कठीन छ।
घोराही, दाङ निवासी रिता लामा पेशाले पत्रकार हुन । उनी सौर्य दैनिक र स्थानिय पत्रिका राप्ती पोष्ट दैनिकमा पनि काम गर्छिन । तर उनी मुलधारको पत्रकारिता सँगै ब्लगिङ र सामाजिक मिडियामा समेत त्यत्तिकै सक्रिय जमेकी छिन् । आफ्नो ब्लगमा मुलतः साहित्यिक रचना पोष्ट गर्ने रिता आफुलाई मन लागेको बेला पढ्न पाइने सहजताले ब्लगिङ गर्न थालेको बताँउछिन् । प्रस्तुत छ उनीसँगको छोटो कुराकानीः
तपाइको दिनचर्या कसरी बित्छ ?
विहान पाँच बजेदेखि एउटा कक्षा लिन्छु, एक घण्टाको । त्यसपछि पत्रपत्रिका पढ्ने, समाचार सुन्ने सँगै, सरसफाईको काम सकेर खाना पछि ११ बजे अफिस जान्छु । त्यहाँ मैले करिव करिव सधैजसो साँझको सात बजेसम्म काम गर्छु । समाचार लेख्ने, रिपोटिङमा जाने, अरुले पठाएका समाचार बनाउने आदि काम गर्छु । साँझ फर्किएर खानापछि नियमितजसो एक दुइ घण्टा केही पुस्तक पढ्छु वा आफ्ना मनका भावना शब्दमा उतार्ने काम गर्छु । सधैँ जसो राती १२ बजेतिर सुतिन्छ ।
मेरो साथीले ब्लगिङ गर्नुहुन्थ्यो । मलाई पनि ब्लगिङमा आकर्षण बढ्यो । उहाँले मेरो ब्लग बनाइदिनु भयो । यसरी पोस्ट गर्नुपर्छ भनेर सिकाइदिनु भयो । ६-७ महिना भयो मैले ब्लगिङ गर्न थालेको । मैले ब्लगमा साहित्य, कथा राख्ने गरेको छु ।
मैले आफ्नो साहित्य कुनै डायरीमा लेखुँला, दराजमा थन्क्याउँला । भरे पढ्नु पर्दा फेरी दराज खोलेर डायरी हेर्नु पर्ने हुन्छ । त्यो समस्याबाट मुक्त हुन मैले ब्लगिङ गर्न थालेको हुँ । म चौबिसै घन्टा कम्प्युटर अगाडी बसेर काम गर्नु पर्ने , समाचार पढ्नु परे पनि कम्प्युटरबाट पढ्नु पर्ने हुनाले कामको साथ-साथै ब्लगिङ गर्न सहज हुने भएकोले ब्लगिङ गर्न थालेँ ।
ब्लगमा प्रतिकिया ?
जसलाई साहित्यमा रुची छ उहाँहरुले पढ्नुहुन्छ । राम्रो छ भन्नुहुन्छ ।
ब्लगिङ गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरु केके हुन ?
आफुले पोष्ट गरेका शब्द, चित्र आदिले अरुको मन दुख्ने पो हो की, कसैलाई आक्षेप लगाउने खालका पो छन् की, त्यस्तै आफ्नै इमेजमाथि नै प्रश्न उठ्ने खालका, हल्का विषयबस्तु पो पोष्ट भएका छन् की भन्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ ।
दाङमा ब्लगिङको ट्रेन्ड कस्तो छ ?
अरु भन्दा पत्रकार साथीहरु धेरैले खोल्नु भएको मैले देखेको छु । कसैले आफ्नो ब्लग खोलेर नियमित समाचार पोस्ट गर्नु भएको छ, फेसबुकमा शेयर गर्नु हुन्छ । स्थापित साहित्यकारले पनि ब्लगमार्फत आफ्नो साहित्य पोस्ट गर्नु हुन्छ जसले गर्दा हामीलाई पढ्न सहज भएको छ ।
दाङमा इन्टरनेटको पहुँच कस्तो छ ?
म दाङको सदरमुकाम घोराहीमा बस्छु । घोराही क्षेत्रमा पत्रकार मात्र नभएर व्यापारी, विद्यार्थी, शिक्षक र अरु सबैले चलाउँछन । सबैको हात-हातमा मोबाइलमा, ल्यापटपमा पनि इन्टर्नेट आइसक्यो । साइबरमा जाने पनि धेरै छन । घोराही, लमही, नारायणपुर, भालुवाङ् जस्ता मुख्य शहरमा इन्टर्नेटको सुविधा राम्रो छ ।
मुलधार र ब्लगमा के फरक छ ?
मिडियामा आफ्नो कुरा हामी लेख्दैनौ । अरुको कुरा मात्र आउने भयो । तर ब्लगमा आफ्नो कुरा जति पनि राख्न पाइयो । आफ्नो भावना व्यक्त गर्न पाइयो ।
एकदमै सकिन्छ । मैले राम्रो-राम्रो साहित्य राख्न सकेँ भने त यसले मेरो पहिचान बनाउने भयो नि ।
यहाँलाई के लाग्छ, ब्लगिङ गर्दा आचार-संहिता चाहिन्छ ?
जतिसुकै व्यक्तिगत भएपनि आचार-संहिता त चाहिन्छ । किनभने ब्लग भनेको सबैले हेर्ने, पढ्ने माध्यम हो । अश्लिल कुरा, व्यक्तिगत आक्षेप, कसैको भावना, चरित्रमाथि आँच आउने कुरा भयो भने अर्को व्यक्तिलाई असर गरिरहेको हुन्छ । वरपरको व्यक्ति र समुदायलाई नै असर गरिरहेको हुन्छ । त्यसैले मलाई आचार-संहिता चाहिन्छ जस्तो लाग्छ ।
ब्लगबाहेक अरु कुन-कुन सोसिअल मिडिया चलाउनु हुन्छ ?
फेसबुक , ट्विटर, मेरोपोस्ट आदि ।
किन चलाउनु हुन्छ ?
प्रथम त मन्थनको लागि हो । त्यसपछी सुचनाको लागि चलाउँछु । बिभिन्न पत्रिका, मिडियाको सुचना आउँछ फेसबुक, ट्विटरमा । पत्रिकाको साइट खोल्नुभन्दा पनि सोसिअल मिडियामा नै सबै अपडेट आइरहेको हुन्छ ।
सोसिअल मिडियाको प्रयोग कसरी भइरहेको छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई ?
टाइम पास, ज्ञान-प्राप्ति र मनोरन्जनको लागि प्रयोग हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई । त्यतिकै चलाउँदा पनि धेरै कुरा सिकिन्छ ।
अहिले सुचनाको युगमा सोसियल मिडियाको भूमिका कस्तो रहेको छ ?
सोसियल मिडियाको भूमिका असाध्यै राम्रो रहेको छ । मिनेट - मिनेट, घन्टा - घन्टामा नयाँ नयाँ जानकारी दिइरहेको हुन्छ । आफु जानै नसक्ने, देख्दै नसकेको ठाँउको दृश्य, समस्या र सुचना देख्न र पढ्न पाइरहेको हुन्छौँ । काठमाडौंमा के-के घटना घट्यो भनेर हामीले दाङमा बसेर तुरुन्तै थाहा पाइसकेका हुन्छौँ ।
ब्लग, फेसबुक, ट्विटर र अरु सामाजिक संजाललाई समाज विकास र सकारात्मक परिवर्तनमा कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ ?
ब्लग, फेसबुक, ट्विटर आदि जस्ता समाजिक संजालमा अश्लिलता धेरै हुन्छ भन्नेहरु पनि छन\_ तर मलाई त्यस्तो लाग्दैन। त्यस्ता अश्लील व्यक्ति वा साथीहरुलाई आफ्नो समाजिक संजालबाट टाढा राख्नु पर्छ । अहिले यी समाजिक संजालहरुमा धेरै जसो सकारात्मक परिवर्तनका कुराहरु पनि पोष्ट गरिएका हुन्छन । धेरै ज्ञानगुन, जानकारीहरु पनि हुन्छन् ।
अहिले देशमा कुनै घटना भइहाल्यो भने, राज्य पक्षबाट केही गलत कदम उठाइयो भने यी सामजिक संजालमा सबैभन्दा पहिले विरोधका स्वरहरु गुन्जिएका हुन्छन । संचारमाध्यमले यिनै आवाजलाई तानेर समाचार बनाएको हुन्छ । यही नै हो सकारात्मक परिवर्तन । यो परिवर्तन अझ परिस्किृत हुदै जानेछ भन्ने मेरो अपेक्षा हो ।
राम्रो रिपोर्ट आइरहेको छ । केहि समय अगाडी नेपालगन्जको पत्रकारले पत्रकारिताको बारेमा भजाउने पत्रकारिता, क्यासिनो र लालचीहरु लेख्नु भएको थियो । त्यहाँको पत्रकारिताको स्थितिको बारेमा बताउनुभएको थियो । पत्रकारको बारेमा राम्रा कुरा हामीले पटक-पटक लेखिरहेका हुन्छौँ तर नराम्रा कुरा बाहिर आएको हुँदैन । नराम्रा कुरा पनि बाहिर ल्याउन जरुरी छ । पत्रकारले गरेका नराम्रा कुरा लेख्नु भएको थियो उहाँले।
मलाई यति राम्रो लागेको थियो त्यो लेख मैले फेसबुकमा शेयर गरेको थिएँ । दुइ-चार जना साथीलाई पनि मैले पढ्न लगाएको थिएँ । उहाँको त्यो लेखलाई कुनै पत्र-पत्रिकाले स्थान दिन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । तर त्यो लेख मैले मेरोरिपोर्टमा पढ्न पाएँ मलाई खुसी लाग्यो ।
रिता लामाको ब्लग: http://rita-lama.blogspot.com/
Comment by Kranti Darai on August 13, 2012 at 12:10pm
congratulations Rita ji,
Comment by एसवी गौतम on August 12, 2012 at 3:50pm
Comment by Indra Dhoj Kshetri on August 9, 2012 at 10:24am
धेरै धेरै बधाई छ रीताजी ।
Comment by प्रेम पौडेल (मरूभूमिको यात्री) on August 9, 2012 at 10:17am
हार्दिक बधाई छ रिताजीलाई साताको ब्लगर बन्नुभएकोमा । ''अहिले देशमा कुनै घटना भइहाल्यो भने, राज्य पक्षबाट केही गलत कदम उठाइयो भने यी सामजिक संजालमा सबैभन्दा पहिले विरोधका स्वरहरु गुन्जिएका हुन्छन । संचारमाध्यमले यिनै आवाजलाई तानेर समाचार बनाएको हुन्छ । यही नै हो सकारात्मक परिवर्तन ।'' यो topic यथार्थ हो ।।
Comment by Binaya Shekhar on August 8, 2012 at 10:02pm
Comment by Dr. Surya B. Parajuli on August 8, 2012 at 8:55pm
तपाईंको अन्तर्वाता पढ्ने अवसर पाए,धेरै राम्रा बिचारहरु छन्,
मोफसलमा बसेर काम गर्नु आँफैमा चुनौती हो,जुन तपाईंले पुरा गर्नु भएको छ,
आफ्नो कार्य बाट बिचलित नहुनुस्,
Comment by Ajeeta Sigdel on August 8, 2012 at 3:19pm
Comment by MeroReport on August 8, 2012 at 3:07pm
Congratulations Rita. We hope to see your blogs posts in MeroReport as well.